တူနီးရှားသမ္မတရွေးကောက်ပွဲရွေးကောက်ပွဲ: Nabil Karoui ပြန်လွတ်လာ - JeuneAfrique.com - TELES RELAY
မူလစာမျက်နှာ » မူဝါဒ တူနီးရှားသမ္မတရွေးကောက်ပွဲရွေးကောက်ပွဲ: Nabil Karoui ပြန်လွတ်လာ - JeuneAfrique.com
သမ္မတရွေးကောက်ပွဲဒုတိယအကြိမ်အတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီသောကိုယ်စားလှယ်လောင်း Nabil Karoui သည် 23 အောက်တိုဘာဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင်ထောင်ချခြင်းခံခဲ့ရသည်ဟုသူ၏အဖွဲ့ ၀ င်များကပြောကြားခဲ့သည်။
အောက်တိုဘာလတနင်္ဂနွေ 13 တွင်ကျင်းပမည့်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲဒုတိယအကြိမ်အတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီသောကိုယ်စားလှယ်လောင်း Nabil Karoui အားဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညနေပိုင်းတွင်လွှတ်ပေးရန်အတည်ပြုခဲ့သည် Jeune Afrique Salwa Smaoui, သူ့ဇနီး။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်၊ Nessma TV ကိုစတင်တည်ထောင်သူ၊ သောကြာနေ့ 23 သြဂုတ်လတွင်မယုံနိုင်လောက်အောင်အခြေအနေများဖြင့်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်။။ ထိုအချိန်မှစ၍ သူသည်သူနှင့်သူ့အစ်ကိုဂါဇီတို့ကိုငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်အခွန်ရှောင်တိမ်းမှုတို့အတွက်ရာဇ ၀ တ်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအနေဖြင့်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့သည်။
သူ၏ဆဲလ်မှစည်းရုံး။ မရပါ၊ ၎င်းသည်သူ၏လှုပ်ရှားမှု၏အစည်းအဝေးများကိုကာတွန်းကားခြင်းတာဝန်ခံခဲ့သောသူ၏ဇနီးဆလ ၀ မ်စမူဝီဖြစ်သည်။, Qalb Tounes, စက်တင်ဘာလတနင်္ဂနွေတွင် 15 တွင်ပထမဆုံးအကြိမ်ကျင်းပခြင်း ကိုယ်စားလှယ်လောင်းသည်ဒုတိယအကြိမ်မဲပေးခြင်းအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီသည်နှင့်သူနှင့်သူ့အကြားပိုမိုတန်းတူညီမျှမှုရှိစေရန်သူ၏လွှတ်ပေးရန်တောင်းဆိုရန်အသံများစွာထွက်ပေါ်လာခဲ့သည် ယင်း၏ပြိုင်ဘက်ဖြစ်သောလွတ်လပ်သောဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရကဆာဆဒ်။. အများပြည်သူရုပ်မြင်သံကြားကပင်လိုအပ်ပါကထောင်ထဲမှာဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုကိုစီစဉ်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလို့ပြောခဲ့တယ်။.
Nabil Karoui ကသူ့အားစွပ်စွဲထားသောအချက်အလက်များအားစိန်ခေါ်သည်။ သူ့ကိုယ်သူ“ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား” အဖြစ်ပူးပေါင်းကြံစည်မှု၏သားကောင်အဖြစ်ရှုမြင်။ နေပြည်တော် ဝန်ကြီးချုပ် Youssef Chahed နှင့်အစ္စလာမ်ဆိုင်ရာရည်ညွှန်းပါတီ Ennahdha ။
အိုင်ဗရီကို့စ်ကမ်းခြေ - Henriette Konan Bédiéနှင့် Clarisse Duncan တို့ထပ်မံစကားပြောနေကြသည် - JeuneAfrique.com